ချစ်သူသက်တမ်းနှစ်(၂၀)ပြည့်မှာ ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန် အမှတ်တရစကားတွေ ပြောခဲ့တဲ့ ဇာဏ်ခီ နဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ – Suehninsi
ဇဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ ဒီနေ့(ဇွန်လ ၁၂) ရက်မှာ ချစ်သူသက်တမ်း နှစ်(၂၀) ပြည့်ခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ချစ်ဇနီးလေးနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေကို ဇဏ်ခီက အခုလို ပြောပြလာပါတယ်။” Happy 20th Anniversary, my love. အနှစ်၂၀ ဆိုပေမယ့် စတွေ့တဲ့နေ့က အူကြောင်ကြောင်ခံစားချက်က တစ်နေ့ကလိုဖြစ်နေတုန်းပဲ။ အူကြောင်ကြောင်ကောင်လေးက
အဲ့ဒီတုန်းက fashion ကအရွဲ၊ အလုပ်ကမကောင်း၊ ဘဏ်အကောင့်မရှိ၊ အာပုတ်ဆော်နံပြီး မာနကလည်းကြီးခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီ့ကောင်လေးက ရည်းစားဖြစ်ခါနီး မိနစ်ပိုင်းအလိုတွေမှာ “ကျွန်တော့် ဘဝထဲဝင်မလာပါနဲ့” လို့ warning ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ Warning လား ထောင်ချောက်ဆင်တာလားတော့ အခုချိန်ထိကိုယ့်ဟာကိုမကြိမ်းသေဘူး။ ဒါပေမယ့် ကံကြမ္မာကစီစဉ်ပြီးသားမို့လို့လား
ဒါမှမဟုတ် ကောင်လေးရဲ့တော်ကီတွေမှာကြွေသွားလို့လားမသိ ကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေး ရူးရူးမိုက်မိုက်ချစ်သွားခဲ့ကြတယ်။ နောက်တော့ကောင်လေးဘာသိလိုက်ရလဲဆိုတော့ ကောင်မလေးကလည်း သူ့လို အရူးလေးပဲဆိုတာကိုပါပဲ။ ဒါကြောင့်ဒီအရူးလေးက
အရူးမလေးကို still madly in love ပါလို့.. You will always be my lobster” ဆိုပြီးတော့ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ပေ့ခ်ျမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်းမှာ လက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုချိန်မှာတော့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း(၁၄) နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းသော
သားလေး နိုဝါ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ မိသားစုလေးကို အားကျလျက်ရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း အများကြီးပါ။ ဇဏ်ခီ နဲ့ ခရစ္စတီးနားခီတို့ဟာ ပရိသတ် အားပေးမှု အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သားလေး နိုဝါကိုလည်း ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဇဏျခီနဲ့ ဒါရိုကျတာ ခရစ်စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောငျနှံကတော့ ဒီနေ့(ဇှနျလ ၁၂) ရကျမှာ ခဈြသူသကျတမျး နှဈ(၂၀) ပွညျ့ခဲ့ပွီလို့ သိရပါတယျ။ ခဈြဇနီးလေးနဲ့ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ အမှတျတရတှကေို ဇဏျခီက အခုလို ပွောပွလာပါတယျ။” Happy 20th Anniversary, my love. အနှဈ၂၀ ဆိုပမေယျ့ စတှတေဲ့နကေ့ အူကွောငျကွောငျခံစားခကျြက တဈနကေ့လိုဖွဈနတေုနျးပဲ။ အူကွောငျကွောငျကောငျလေးက
အဲ့ဒီတုနျးက fashion ကအရှဲ၊ အလုပျကမကောငျး၊ ဘဏျအကောငျ့မရှိ၊ အာပုတျဆျောနံပွီး မာနကလညျးကွီးခဲ့သေးတယျ။ ဒါပမေယျ့အဲဒီ့ကောငျလေးက ရညျးစားဖွဈခါနီး မိနဈပိုငျးအလိုတှမှော “ကြှနျတေျာ့ ဘဝထဲဝငျမလာပါနဲ့” လို့ warning ပေးခဲ့ဖူးတယျ။ Warning လား ထောငျခြောကျဆငျတာလားတော့ အခုခြိနျထိကိုယျ့ဟာကိုမကွိမျးသဘေူး။ ဒါပမေယျ့ ကံကွမ်မာကစီစဉျပွီးသားမို့လို့လား
ဒါမှမဟုတျ ကောငျလေးရဲ့တျောကီတှမှောကွှသှေားလို့လားမသိ ကောငျမလေးနဲ့ကောငျလေး ရူးရူးမိုကျမိုကျခဈြသှားခဲ့ကွတယျ။ နောကျတော့ကောငျလေးဘာသိလိုကျရလဲဆိုတော့ ကောငျမလေးကလညျး သူ့လို အရူးလေးပဲဆိုတာကိုပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ဒီအရူးလေးက
အရူးမလေးကို still madly in love ပါလို့.. You will always be my lobster” ဆိုပွီးတော့ ဇှနျလ ၁၂ ရကျနေ့ မနကျ ၁၀ နာရီကြျောက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျ ပခြေျ့မှာရေးသားခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ ဇနီးမောငျနှံ နှဈယောကျဟာ ၂၀၀၆ ခုနှဈအတှငျးမှာ လကျထပျခဲ့တာဖွဈပွီး အခုခြိနျမှာတော့ အိမျထောငျသကျတမျး(၁၄) နှဈ ရှိပွီဖွဈပါတယျ။ တဈဦးတညျးသော
သားလေး နိုဝါ ၂၀၁၀ ခုနှဈမှာ မှေးဖှားခဲ့တာဖွဈပွီး ပြျောစရာကောငျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ကို ပိုငျဆိုငျထားပွီဖွဈပါတယျ။ သူတို့ မိသားစုလေးကို အားကလြကျြရှိတဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး အမြားကွီးပါ။ ဇဏျခီ နဲ့ ခရစ်စတီးနားခီတို့ဟာ ပရိသတျ အားပေးမှု အခိုငျအမာ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျတှဖွေဈကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ သားလေး နိုဝါကိုလညျး ပရိသတျတှကေ ခဈြခငျကွတယျလို့ သိရပါတယျ။